मेरो उमेर ४१ वर्ष भयो एक वर्षदेखि पिसाब चुहिने र पिसाब लाग्नासाथ केहीबेर पनि रोक्न नसक्ने समस्या छ। चिसो मौसममा यस्तो बढी हुन्छ। कहिलेकाही दायाँतर्फको पाटो सिरिङ भएजस्तो हुन्छ।
तपाईंले नामको पछाडि देवी जोडेकाले महिला भन्ने बुझेर यो सुझाव दिँदैछु। महिलामा पिसाब चुहिने समस्याको कारण आङ खस्ने समस्याले हुनसक्छ। आङ खसेको महसुस भइनसकेको भए पनि प्ररम्भिक अवस्था भएकोले यस्ता लक्षण देखिएको हुनसक्छ। त्यसबाहेक पिसाबथैली तल झरेको, बच्चा पाएको भए बच्चा पाउने क्रममा बल गर्दा पिसाबको नली तल झरेकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। पिसाब नली र पेटको सन्तुलन बिग्रिएर पनि पिसाब चुहिने समस्या हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श एवं जाँच गरेर मात्र यकिन गर्न सकिन्छ। मेरुदण्डको समस्या र डाइबेटीजले पनि यस्तो हुनसक्छ। पुरुषमा चाहिँ अधिकांश अवस्थामा प्रोस्ट्रेड ग्रन्थीको समस्याले पिसाब चुहिने समस्या आउन सक्छ। संक्रमण र पिसाबथैलीको पत्थरीले पनि पिसाब चुहिने समस्या देखिनसक्छ।
मेरो उमेर ३३ वर्ष भयो। एक सातामा १ दशमलव ५ लिटर पानी मेरा लागि प्रशस्त हुन्छ। म दैनिक एकदमै थोरै पानी पिउँछु। मलाई पानी पिउन मन लाग्दैन। तर, पिसाब सामान्यभन्दा बढी हुन्छ। जाँच गर्दा अरु कुनै समस्या छैन। के कारण यस्तो भएको होला?
दैनिक डेढ लिटर पानी खाए पनि बढी पिसाब लागेको तपार्इंले महसुस गर्नुभएको रहेछ। पानीमात्रै थोरै खाएँ भनेर हुन्न। दूध, दाल, तरकारीको झोल र खानामा पनि प्रकृतिक रूपमा पानी हुन्छ। पिसाब कति हुन्छ भन्ने खुलाउनु भएको छैन्। तपाईंले बढी पिसाब भयो भनेर सोच्दैमा बढी भन्न मिल्दैन। २४ घण्टाको पिसाबलाई संकलन गरी नापेर कति भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ।
पिसाब बढी हुने समस्या रगतमा क्याल्सियमको मात्रा बढी हुने समस्या (हाइपर क्याल्सियम), सुगर नभइकन पनि पिसाब बढी हुने समस्या डाइबेटिज इन्सिपिडर र हर्मनले कारणले पनि पिसाब पातलो भएर बढी हुनसक्छ।
मेरो छोरा १४ वर्षको भयो। ऊ स्वस्थ छ। उसको उचाई ६ फिट र ६० केजी तौल छ। तर, ओछ्यानमा पिसाब गर्ने उसको बानी छ। आठ वर्षदेखि यस्तो समस्या छ। जाँच गर्दा उसको ब्लाडर धेरै सेन्सेटिभ भएको देखियो। ब्लाडर पिसाब क्यारी गर्न सक्नेभयो भने समाधान हुन्छ रे, यो सेन्सेटिभ हटाउने उपाय केही छ?
ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने समस्या खासगरी ९ /१० वर्षको उमेरमा हटिसक्नुपर्ने हो। तर, १४ वर्षको हुँदा पनि यो समस्या जारी रहेछ। करिब आठ वर्षदेखि निरन्तर भएकाले यो अलि अस्वाभाविक छ । यसको उपचार व्यायाम र केही औषधीबाट गर्न सकिन्छ। नेपालमा यस्तो ब्याडरको कसिलोपना बढाउने व्यायाम सेन्टर नभए पनि हङकङमा मूत्ररोग विशेषज्ञसँग भेटेर परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
खासगरी यो आफैंमा रोगले पनि हुनसक्छ। कतिपय बालबालिकामा सानो उमेर (विशेषगरी विद्यालय पढ्ने समयमा) पिसाब फेर्ने उपयुक्त वातावरण नहुँदा च्यापेर बस्ने बानी हुन्छ र यसले समस्या पार्नसक्छ। कतिपयले लाज लागेर पनि अर्काको अगाडि वा घरबाहिर पिसाब फेर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा पिसाबथैली रियाक्टिभ भएर यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ। विस्तारै त्यसले गर्दा सेन्सिटिभी बढ्दै गएर अलिकति भरिनासाथ रोक्न नसक्ने भएर पिसाब खुस्किन्छ।
म २७ वर्षको भएँ। उचाई १७२ सेमी र तौल ५३ केजी छ। तीन वर्षअघि नेपाल हुँदा मेरो रक्तचाप ठिक थियो। कोरिया आउनासाथ एक्कासि बढेको रिपोर्ट आयो। अहिले पनि जाडोमा बढेको र गर्मीमा कम हुने हुन्छ। दायाँ र बायाँ पाखुराको रक्तचाप अन्तर २० एमएमएचजी छ। के गर्नुपर्ला?
तपाईंको उमेर, तौल वा मोटोपना हेर्दा रक्तचाप देखिन नपर्ने हो। दुई पाखुराको रक्तचाप अन्तर १० सम्म ठिकै हो तर, २० धेरै बढी हो। यस्तो अवस्थामा तपाईंले किड्नीसम्बन्धी परीक्षण र मुटुरोग विशेषज्ञसँग परामर्श गरी मुटुका विभिन्न जाँच गराउनुपर्छ। रक्तचाप मौसमअनुसार घट्ने/बढ्ने हुँदैन। कुरा सुन्दा भास्कुलाइटिस भनिने मुटुका धमनीसम्बन्धी समस्याले यस्तो हुनसक्छ। एन्जियोग्राफी, किड्नी र हर्मन पनि परीक्षण गर्नुपर्छ।